Torohevitra - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Mitadiava torohevitra vitsivitsy hijanonana amin'ny trano ambanivohitra any Galicia ary koa fitaomam-panahy amin'ny trano ambanivohitra tsara indrindra.
Mandehandeha any Portugal amin'ny fiara
Ny fitsangatsanganana an-tsambo any Portugal dia iray amin'ireo fomba mahaliana indrindra hahafantarana ilay firenena mifanila aminy. Momba ny…
Fialan-tsasatra amin'ny alika
Ho an'ny olona maro ny biby fiompy sy ny dia dia filana roa izay tena sarotra ny mifidy. Taloha,…
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao misafidy masoivoho fizahan-tany miaraka amin'ny torohevitra mahaliana izay mitarika anay hanakarama ity karazana serivisy ity.
Ny teny geek dia neologisma ary teny fampiasan'ny olona isan'andro sy tsy ara-potoana izay nantsoina hoe ...
Ny Jiro Avaratra, any Norvezy
Ny iray amin'ireo trangan-javatra voajanahary tsara tarehy indrindra hita dia ireo antsoina hoe jiro avaratra na aurora borealis. Fampisehoana inona…
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao misafidy fiantohana fitsangatsanganana iraisam-pirenena ary rehefa ilaina ny mividy ny iray amin'ireto fiantohana ireto.
Iza no tsy maniry dia lavitra? Voaporofo fa ny dia dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra amin'ny ...
Ny fitsangatsanganana avy any Mexico mankany Eropa dia efa manana fepetra vaovao. Te hahafantatra ve izy ireo amin'ny dia tsy misy fitsaharana? Hilaza aminao izahay!
Las Rozas Village, fiantsenana lafo vidy eo akaikin'i Madrid
Ny tontolon'ny andro ankehitriny dia manodidina ny fihinanana, zavatra foana, tsy misy farany, izay aingam-panahy imbetsaka isan-taona miaraka amin'ny ...
Tanàna feno fiainana i Madrid, feno hetsika hatao ary toerana very mandritra ny taona….
Amin'izao fotoana izao, maro ny olona no manao mialoha ny fandraisana ny fialan-tsasatra, amin'ny fiheverana ireo anton-javatra toy ny ...
Fiantohana ara-pitsaboana ho an'ny dia, inona no hodinihina
Rehefa mikasa dia dia misy zavatra maro ao an-tsaintsika: trano, hetsika, ...
Ahoana no hizarana fiara handeha lavitra
Ampahafantarinay anao ny fomba tsara indrindra hizarana fiara amin'ny dia lavitra kokoa, miaraka amina fampiharana mahaliana izay manamora ny serivisy.
The Eiffel Tower dia kilalao fizahan-tany any Paris. Saika tsy afaka hitsidika ny renivohitra frantsay ary tsy hianika izany ...
Kit ho tafavoaka velona amin'ny dianao, izay tsy azonao adino
Tonga ihany io fialan-tsasatra io izay notadiavinao fatratra ary tena mendrika anao. Ny dia efa nomaninao nandritra ny volana maro dia handeha ...
Inona no hotadiavina rehefa manofa karajia
Manome torolàlana sy hevitra vitsivitsy anao izahay rehefa manofa karajia, fiara mety tsara amin'ny dia an-dàlana.
Paris Pass, lakilen'ny fizahan-tany ho an'ny tanàna
Paris no iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra eto an-tany amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Fialan-tsasatra am-pitiavana, herinandro hitsidihana ireo tranombakony na handehanana fisotroana any Are you to Paris? Mieritreritra ny hampiasa vola euro vitsivitsy ve ianao ary hividy ny Paris Pass? Vakio tsara avy eo, mety aminao na tsia ...
Jereo ny tombony rehetra sy ny fihenan'ny vanin'ny camper, izay mety indrindra amin'ny dia faran'ny herinandro.
Ahoana no hialana amin'ny famitahana rehefa manofa trano ianao
Mba handany andro tsy hiasana andro vitsivitsy, ny fanofana trano dia iray amin'ireo loharanom-bola takian'ny ...
Ahoana ny fomba handaminana fialan-tsasatra ho an'ny mpianakavy
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay ny amin'ny fomba handaminana sy handaminana fialan-tsasatra tsara ho an'ny fianakaviana mba hahafahan'ny tsirairay mankafy azy io mitovy.
Ilaina ve ny maka fiantohana fanafoanana dia?
Rehefa mikarakara fialantsasatra dia misy zavatra maro izay tsy maintsy raisintsika: ny hotely, ny valizy, ny fitaterana, ny ...
Inona avy ireo akanjo entina mitsangantsangana?
Ity no fanontaniana an-tapitrisany dolara izay apetraky ny mpandeha tsirairay rehefa miatrika ny fanamby amin'ny famonosana ...
Egypt dia toerana halehan'ny mpitsangatsangana rehetra. Indray mandeha amin'ny fiainanao dia tsy maintsy mahita ny piramida sy ny tempoliny taloha ianao. Egypte manontolo Raha mankany Egypt ianao ary mikasa ny hifanerasera dia mora aminao ny mahafantatra ny sasany amin'ny fomban-drazana sy ny fomban-drazana mba tsy ho tsy mahalala fomba ary hiala voly.
Ny sarivongan'i Jesosy dia mihabetsaka manerana ny tontolo tandrefana sy kristiana ary rehefa miakatra eny an-tampon'ny tendrombohitra na havoana izy ireo dia lasa toerana malaza. Iray amin'ireo toerana fizahan-tany ara-pinoana malaza indrindra ao Mexico ny any Guanajato: io dia ny Cerro del Cubilete sy ny sarivongan'i Kristy goavambe.
Ny pasipaoro dia antontan-taratasy ofisialy manana ny tandrify iraisam-pirenena navoakan'ny firenena iray mba hahafahan'ny ...
Toeran-kaleha tsara amin'ny fahavaratra dia ny Nosy Balearic, vondrom-piarahamonina mitokana mizaka tenan'i Espana izay ao amin'ny Ranomasina Mediterane ary Palma no renivohiny. Ao anatiny Tianao ve ny mankafy amoron-dranomasina amin'ity fahavaratra ity? Mandehana mankany Menorca ary mandany andro any Cala Turqueta: fasika fotsy, rano manga, hazo kesika, masoandro ...
Inona no hatao any amin'ny tanànan'i Rocío
Raha tianao ny tanàna taloha sy tsara tarehy ary fivahinianana masina dia aza hadino ny mitsidika an'i El Rocío, tanàna Andalosiana mahafinaritra.
Copper Canyon, renirano mahatalanjona any Mexico
Toa mahagaga anao ve ny Grand Canyon any Colorado? Tsy fantatrao ny Copper Canyon! Any Mexico izy ireo ary mahafinaritra.
Antony fitsangatsanganana tsy misy valizy
Fifaliana ny fitsangatsanganana tsy misy kitapo voamarina, na aiza na aiza no jerenao. Ho an'ny vao manomboka, rehefa mandeha miaraka amin'ny valizy fotsiny ...
Fomba ahazoana fahazoan-dàlana mitondra fiara iraisam-pirenena
Ny iray amin'ireo fomba mahaliana indrindra hahafantarana firenena amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fiara. Io dia mamela antsika…
Vaksiny hitsangatsangana any Thailand
Handeha any Thailandy ve ianao? Avy eo dia tokony ho fantatrao daholo ny momba ny vaksiny ilainao mankany Thailandy ary tsy harary.
Tamin'ny voalohany dia mety ho toy ny hevitra adaladala ny haben'ny dia, fa mitsangatsangana amin'ny planeta mitsidika tsy tambo isaina ...
Ny dingan'ny Camino del Norte, iray amin'ireo Caminos de Santiago, dia tena mahaliana ary mihazakazaka manamorona ny morontsirak'i Cantabrian, miaraka amin'ny sary mahafinaritra sy faritra an-tanàn-dehibe.
Torohevitra momba ny dia irery
Na dia mety hanome fepetra kely aza izany amin'ny voalohany, indrindra ireo mpandeha tsy za-draharaha, ny marina dia ny mandeha irery ...
Iray amin'ireo toerana fizahan-tany mahafinaritra any amin'ny faritra Azia-Pasifika i Aostralia. Kanto ny firenena nanomboka ...
Mora kokoa ny mitety an'i Japon amin'ny alàlan'ny Japan Rail Pass. Aza misalasala! Fiaran-dalamby, fiara fitateram-bahoaka, ferry, ny zavatra rehetra ho avy ary hamakivaky ity firenena lehibe ity.
Rehefa mandamina fialantsasatra isika dia misy zavatra maro ao an-tsaintsika: fitaterana, valizy, hotely, fitsangatsanganana ...
Inona ny Visa 'Holiday Holiday' ary nahoana isika no liana amin'izany?
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao hoe inona ilay Visa fialantsasatra ary nahoana izahay no liana hahafantatra izany amin'ireo rehetra te-hivezivezy sy hiasa.
Na dia nanomana dia mialoha aza izahay mba tsy hamela toerana ho an'ireo tranga tsy ampoizina, indraindray misy zavatra mety hitranga ...
Handeha any Tokyo ve ianao ary te hahita ny Tendrombohitra Fuji? Avy eo mitodi-doha mankany Hakone, latsaky ny 100 km: ala, lohasaha, vava volkano, loharano mafana, tendrombohitra ary mazava ho azy, ny Fuji.
Tianao ve i Afrika? Avy eo ianao dia tsy maintsy mitsidika an'i Algeria sy ny zava-mahatalanjona: arkeolojia, tantara, valan-javaboary, tany efitra, tendrombohitra ary torapasika mahafinaritra.
Ny fandehanana safari any Afrika dia iray amin'ireo traikefa manankarena indrindra sy tsy hay hadinoina azon'ny mpandeha rehetra atao. Fantatro…
Toerana tsara indrindra handaniana Krismasy any Azia
Tsy misy toa ny zoron'i Azia handany Krismasy, fa ny tanjona tsara indrindra dia Korea Korea, Sina ary Japon. Aza hadino izy ireo!
Apetraho any Korea atsimo ny làlanao miandry anao amin'ny sandry malalaka. Mazava ho azy, alohan'ny hamakiana ity torolàlana ity miaraka amin'ny fampahalalana tsara indrindra momba izay tokony ho fantatrao.
Raha resaka fitsangatsanganana, indrindra rehefa mila fiaramanidina mpampitohy hahatratra ny toerana halehantsika isika, ny lava be ...
Trano fisotroana mangatsiaka indrindra ao Buenos Aires
Rehefa mankany Buenos Aires ianao dia aza mitsahatra mivoaka mankamin'ny bara ka soraty ny lisitry ny bara faran'izay mangatsiaka indrindra ao Buenos Aires, aza hadino izany!
Ireo firenena 5 mampidi-doza indrindra mandeha irery
Na dia manome fanajana aza ny voalohany, matetika ny fitsangatsanganana irery no iray amin'ireo zavatra niainanao niainana ...
Torohevitra 6 ho an'ny torimaso amin'ny sidina lavitra
Na dia ny fiaramanidina izay nandehananao sambo ho fialan-tsasatra nofinofinao aza dia manana rafitra fialamboly ...
Mihevitra ve ianao fa lafo ny mankany amin'ny Nosy Paka? Esory io hevitra io. Paradise Island na Rapa Nui dia paradisa azo idirana ka amboary ny kitaponao ary miomàna.
Inona ny zoko amin'ny maha-mpandeha ahy raha nofoanana na tara ny sidina ataoko?
Rehefa mankany amin'ny seranam-piaramanidina handray sidina isika dia mety hitranga na hihemotra na nofoanana izany. Is…
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba fivezivezena mandritra ny herinandro iray miaraka amin'ny kitapo entina tokana. Na ho an'ny ankizilahy na ho an'ny ankizivavy.
Tetika 8 hitsitsiana fotoana amin'ny fanaraha-maso fiarovana ny seranam-piaramanidina
Isaky ny mila fiaramanidina isika dia miatrika ny fanaraha-maso any amin'ny seranam-piaramanidina, dingana mankaleo izay misy ...
Ho any Beijing ve ianao? Ny tanàna voarara, ny rindrina lehibe ary ny mausolika an'i Mao dia tsy azo ekena ka soraty ireo torohevitra ireo hankafizanao azy ireo.
Androany izahay dia manome anao toro-hevitra sy toro-hevitra maromaro handehanana soa aman-tsara ao anaty fiaranay sy miaraka amin'ny biby fiompinay. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
Rehefa mankany Bruges ianao dia maka aina mandritra ny sakafo maraina na dite ao amin'ny iray amin'ireo kafe mahafinaritra sy mahafatifaty 5 ireo: kafe, dite, mofomamy, sôkôla, sôkôla.
Fitsangatsanganana an-tongotra avy any Bangkok
Ho any Bangkok ve ianao? Avy eo dia mitandrema andro roa hanaovana fitsangatsanganana any Bangkok: rava, tsena, tempoly ary torapasika mahafinaritra.
Rahoviana no mora kokoa ny mitsidika ireo torapasika tsara indrindra eran'izao tontolo izao?
Ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra dia matetika mitovy amin'ny torapasika, masoandro, ranomasina ary fisotroana amoron-dranomasina. Ny fanadihadiana isan-karazany dia manondro fa farafaharatsiny iray ...
Ny teknolojia vaovao dia nanova ny fomba fitetezam-paritany ary lasa mahazo aina sy tsotra kokoa. Ny finday avo lenta dia ...
Nanidina ve ianao sa hanidina sa te-hanidina miaraka amin'ny Emirates? Iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsara indrindra eran'izao tontolo izao izy ka fantaro hoe manao ahoana izy, ny tsara sy ny ratsy.
Torolàlana hahitana ny laharan'ny Visa ao amin'ny pasipaoro na visa, antontan-taratasy ilaina amin'ny fivezivezena any amin'ny firenen-kafa. Hainao ve ny mahazo azy?
Torohevitra hankafizanao dia lavitra
Amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra dia maro no manomboka ny fialan-tsasatra nandrasana hatry ny ela. Ny sasany mankany amin'ny toerana lavitra mila mifanaraka amin'ny ...
Handeha any Berlin amin'ny fahavaratra ve ianao? Mipoapoaka amin'ny fiainana rehefa mafana ka soraty izay azonao atao: milomano anaty dobo na farihy, misakafo any ivelany, mandeha mitsangatsangana ...
Antony fitsangatsanganana matetika kokoa
Amin'ity lahatsoratra anio alahady ity dia manome anao antony 5 handehanana matetika izahay, firy no ilainao? Aiza no halehanao manaraka?
Raha tianao ny sary mihetsika Japoney dia azonao antoka fa fantatrao i Hayao Miyazaki. Ao Tokyo, aza hadino ny mitsidika ny Ghibli Museum, tontolon'ny fahagagana!
Zavatra 8 tsy tokony hataonao rehefa mandeha fiara
Tena mampientam-po tokoa ny hevitra mikapoka ny arabe miaraka amina vondrona namana iray. Izay…
Fitsangatsanganana tsara indrindra avy any Seville
Raha mandeha mitsangatsangana mankany Seville ianao dia aza adino ny mahita ny manodidina azy. Betsaka ny tanàna azo tsidihina afaka lavitra an-tongotra! Córdoba, Cadiz, Jerez de la Frontera ...
Ho avy ny fahavaratra. Nieritreritra ny atsimon'i Frantsa ve ianao? Languedoc dia manolotra kolontsaina, tantara ary torapasika miavaka. Ho fahavaratra tonga lafatra io.
Zavatra tokony hatao any San Francisco
Aza misalasala mahafantatra an'i San Francisco! Ny fiampitana ny vavahady volamena, ny fitsidihana ny Chinatown sy ny lapan'ny tanàna na ny fitsidihana ny arabeny amin'ny fitaterana dia ho mahafinaritra.
Ahoana ny fomba handaminana ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro
Mitadiava hevitra azo ampiharina sasany handaminana tsara ny fitsangatsangananao amin'ny faran'ny herinandro. Dia kely izay azontsika atao drafitra haingana.
Ireo fisarihana any Sydney izay tsy azonao adino
Ho any Sidney ve ianao? Ity misy lisitr'ireo zavatra tsy maintsy atao: miakatra amin'ny Bridge, kayak na ferry, ary mitsangatsangana. Mifalia!
Azo atao ny mandeha miaraka amin'ny biby fiompinao
Ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny biby fiompinao dia mety ankehitriny izay efa ahitantsika fotodrafitrasa maro momba ny fomba sy ny toeram-ponenana omena azy.
Tianao ve i El Tibet? Avy eo amboary tsara ny dianao ary fantaro ny zava-drehetra momba ny visa sy ny fahazoan-dàlana manokana ilainao hivezivezy any an-tampon'izao tontolo izao.
Ny lahatsoratra anio dia fitohizan'ny omaly. Miverina izahay miaraka amin'ny tolo-kevitra sy torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny toerana telo samihafa (II): India, Arabia ary Jordania.
Androany dia mandeha bebe kokoa amin'ny olana ara-pahasalamana sy ny mahasarika indrindra amin'ny dia izahay ary mitondra anao ny tolo-kevitra sy torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny toerana telo samihafa.
Fitsangatsanganana 5 sy torohevitra vitsivitsy hitety ity 2017 ity
Ny fitsangantsanganana dia safidy fialan-tsasatra toy ny hafa rehetra. Miaraka amin'ny tolotra fialam-boly mahafinaritra sy ny mety hitsidihana ...
Devon, fahavaratra anglisy
Te hanana fialantsasatra amin'ny fahavaratra anglisy ve ianao? Avy eo mitsidika an'i Devon: trano mimanda, hantsam-bato, moron-dranomasina, tanàna antonony, labiera.
Inona no hatao mandritra ny fiandrasana ny fiaramanidina
Amin'ity lahatsoratra asabotsy ity dia manome anao toro-hevitra maromaro momba ny zavatra hatao ianao mandritra ny fiandrasana ny fiaramanidina eny amin'ny seranam-piaramanidina. Manao veloma ny mankaleo.
Interrail: vaovao sy torohevitra momba ny dia lamasinina any Eropa
Nandritra ny fotoana lava be, ny Interrail no fomba nahafantaran'ny tanora kolontsaina hafa ary nanomboka ny fandaharam-pianarana ...
Zavatra mety hahagaga anao raha vahiny ianao ary mitsidika an'i Espana
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia holazainay aminao kely momba an'i Espana sy ny "hafahafa" mety hahagaga anao raha vahiny ianao ary mitsidika anay.
Toerana manerana an'izao tontolo izao izay tsy mahazo mitsidika
Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao toerana 5 manerana an'izao tontolo izao izahay izay tsy avela hitsidika. Raha liana ianao, dia vakio hatrany mba hahalalanao hoe iza izy ireo.
Trano frantsay tsara tarehy 3 mety tsy fantatrao
Aza mijanona amin'ireo lapa mpizahatany indrindra ao Loire. Jereo ireo hafa izay tsara tarehy na mihoatra. Ireto misy telo tsy dia fantatra sy mahafinaritra.
Fitsangatsanganana any Iran, toerana misy ny sivilizasiôna
Toerana magie i Iran ka raha tianao ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana amin'ny toerana tena samihafa dia tadiavo izany. Eto ianao dia manana fampahalalana azo ampiharina hanatanterahana azy.
Fanalahidin'ny fitehirizana ny dia lavitra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fanalahidy vitsivitsy amin'ny fitehirizana ny dia lavitra izahay, indrindra ireo fomba 5 fampiasan'ny mpandeha izany.
Safidy mora vidy
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba fivezivezena ara-toekarena kokoa amin'ireto safidy mora vidina ireto: fiaran-dalamby na fiaramanidina, hotely na fiaraha-monina amin'ny hafa, sns.
Mampiseho aminao ny vola samihafa any Azia izahay amin'izao fotoana izao, mba hahafahanao manavaka sy manasokajy azy ireo tsy misy olana.
Inona avy ireo akanjo sy entana hafa tokony horaisinao amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo?
Raha lany amin'ny sambo lehibe ny fialantsasatrao manaraka, eto dia lazainay aminao hoe inona ny akanjo sy zavatra hafa tokony horaisinao amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo.
Torohevitra momba ny dia voalohany amin'ny dia an-tsambo
Raha handeha sambany ianao amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia aza hadinoina ireo torohevitra ilaina aminao mba hankafizanao tanteraka.
Hatramin'ny andro taloha, ny fivahiniana tany amin'ny toerana masina dia fanaon'ny fivavahana maro. Ireo zotram-piaramanidina ireo dia nisy dikany ...
Te hanana morontsiraka tsara indrindra eto Philippines ve ianao? Avy eo mankanesa any Boracay!
Soraty ity fampahalalana sy torohevitra ity hankafizanao an'i Sardinia miaraka amin'ny paosinao eo an-tsorokao.
Fampiharana mahasoa 5 hanamora ny dianao
Ny iray amin'ireo fahafinaretana tsara indrindra amin'ny fiainana dia ny dia. Ny fahalalana ny vazan'izao tontolo izao dia ahafahantsika mahazo traikefa ...
Raha tianao ny tantara, ny taloha, ny fahalalana izay zavatra nitranga tamin'ny toerana sasany, ity lahatsoratra ity ...
Ny fanaovana dia lavitra dia antony iray mahafaly foana, indrindra rehefa fialam-boly fa tsy adidy, fanoloran-tena ...
Mbola manam-potoana handefasana fitsangantsanganana an-dranomasina eny amin'ny Ranomasina Baltika ianao! Avelako ho anao ny tolotra sy torohevitra vitsivitsy hahafantarana ireo toerana mahafinaritra ireo.
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankizy, mba hahatonga azy io ho traikefa tsara ho an'ny fianakaviana iray maniry ny hamerina.
Misy foana ny fotoana voalohany ho an'ny zava-drehetra, na dia ny manidina. Raha handray ny sidinao voalohany ianao ato ho ato, dia mety hanampy be ity lahatsoratra ity.
Zavatra mitranga aminao rehefa mandeha
Ireto misy zavatra manjo anao rehefa mandeha: Mahatsiaro ho fantatra amin'izy rehetra ve ianao, na angamba amin'ny sasany ihany?
Ahoana ny fomba hamehezana tsara ny dia
Efa akaiky ny fialan-tsasatra ary miaraka amin'izy ireo dia tonga eny amoron-dranomasina, mankany amin'ny ...
Mitsitsia ny fanofana fiara amin'ny fialantsasatra izao
Mandeha amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa nefa tsy mila miankina amin'ny hafa dia mahafinaritra, sa tsy izany? Raiso an-tsoratra ireto torohevitra ireto mba hitsitsiana vola amin'ny fanofana fiara.
Torohevitra hiadiana amin'ny aretin'ny haavon'ny toerana ambony
Ny aretina na soroche amin'ny toerana avo dia mampatahotra ny anarana amin'ny fihetsika ara-batana amin'ny vatan'olombelona vokatr'izany ...
Mety ve ny karatra fizahan-tany any Paris sa tsia?
Misy karatra fihenam-bidy fizahan-tany ho an'ny mpitsangatsangana rehetra mitsidika an'i Paris, iza amin'ireo no ho anao? Mikaroha, manangona vola ary mankafiza!
Tambajotra sosialy enina hijanona maimaimpoana manerantany
Raha te hitety an'izao tontolo izao mihaona amin'ny olona ianao nefa tsy manam-bola hialana sasatra, ny zavatra tsara indrindra dia ny fampiasana ireo tambajotra sosialy ireo hitoerana maimaimpoana sy hivezivezy!
Torohevitra hahazoana tombony betsaka amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo
Ankafizinay ny fisian'ny tranombakoka maimaim-poana manerantany. Okay, hevitra tsara izany. Sady koa anie…
Raha tsy fantatrao ny zon'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, dia azon'ireo orinasam-pitaterana an-tsambo hitaky karazana olana ianao. Jereo eto ny zonao.
Miaina ny fientanam-po amin'ny Herinandro Masina any Vatican
Miaina ny fihetsem-po amin'ny fandaniana ny herinandro masina any Vatican
Eny, ao anaty krizy isika; eny, vitsy sy vitsy ny olona izay tsy mahazaka ny "rendrarendra" amin'ny dia ...
Fampahalalana sy vidiny hankalazana ny herinandro masina any Jerosalema
Soraty ireo torohevitra ireo hitsidihana ny riandranon'i Iguazu amin'ny 2016
Fampahalalana momba ny fomba handehanana any Islandy
Fampahalalana azo antoka momba ny fomba handehanana any Islandy, amin'ny fiaramanidina, amin'ny sambo
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba handeha miaraka amin'ny biby fiompy
Tokantrano enina amin'ny folo no manana biby fiompy any Espana. Raha atotaly dia biby maherin'ny 16 tapitrisa izay amin'ny ...
Handeha fiaramanidina ve ianao? Afaka mitondra sakafo amin'ny fiaramanidina ve ianao? Fantaro izay azonao na tsy azonao entina ao anaty valizinao ary iza amin'ireo no afaka mampihemotra.
Torohevitra manampy amin'ny fandehanana any ivelany
Manomana fialan-tsasatra any ivelany ve ianao? Ireto misy torohevitra mahasoa tokony hotadidina ao an-tsaina rehefa handeha hanao dia ianao.
Mandehandeha bebe kokoa, tanjona ho an'ny 2016
Soraty amin'ny lisitry ny fanapahan-kevitrao ity manaraka ity: "Mandehandeha bebe kokoa, tanjona ho an'ny 2016." Amin'izay fotoana izay vao hitombo amin'ny maha-olona anao sy hahazoanao traikefa.
Torohevitra azo ampiharina amin'ny dia azo antoka sy azo antoka
Ireto misy torohevitra tsotra azo ampiharina amin'ny dia azo antoka sy azo antoka. Aza adino fa ny fikasana mialoha ny dia rehetra dia manakana antsika amin'ny tsy ampoizina ratsy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanohy hahafantatra izahay hoe iza no mpiara-monina mampidi-doza indrindra eto Etazonia mba hanananao vaovao momba izay mety ho hitanao
Eo anelanelan'ny dia ataontsika amin'ny toerana sasany mampidi-doza indrindra any Etazonia, dia tonga tany Woodside, tanàna iray any South Carolina izahay.
Amin'ity indray mandeha ity izahay dia hampahafantatra anao ireo tranonkala fizahan-tany ambanivohitra be mpitsidika indrindra. Eo amin'ny toerana voalohany ahitantsika ...
Keeway Superlight 200: moto Chopper moto mety tsara amin'ny fitsangatsanganana moto
Ny fitsangatsanganana môtô dia iray amin'ireo fahafinaretana mahavariana indrindra ho an'ireo izay tia adrenaline.
Bibilava any Bali
Any Bali dia misy bibilava, mety hahita iray isika na tsia fa olana daholo ny vintana.
Mamitaka haka sary tsara eny amoron-dranomasina
Ny vanim-potoana fahavaratra dia akaiky dia akaiky ary ny mari-pana mafana dia manasa anao handeha amin'ny moron-dranomasina mba hialana sasatra ...
Ny fitaterana an-dranomasina no ahafahantsika mivezivezy ambonin'ny rano, izay ...
Androany isika dia hanao fanazaran-tena amin'ny paragliding, fanatanjahantena ahafahantsika manidina avy eo amin'ny tampon'ny tampon'ny ...
Mpandamina fitsangatsanganana an-tserasera tsara indrindra
Amin'ity tranga ity dia hanonona fitaovana an-tserasera ilaina ho an'ny mpandeha izahay. Andao atomboka amin'ny fahazoan-dàlana mankany Tripit fa tsia ...
Karaiba Karaiba: safidy tsara ho an'ny fitsangantsanganana mpitovo
Te-handeha irery ve ianao ary hiverina miaraka aminao? Raha tsy manana mpiara-miasa ianao izao, ary mitady orinasa, dia ho liana hahafantatra ...
Fiheverana amin'ny fiasana amin'ny sambo fitsangantsanganana
Raha anisan'ireo tia fitsangantsanganana an-tsambo ianao ary maniry ny hitety an'izao tontolo izao amin'ny ...
Agua de Cacao, ny fisotroan'ny Acapulco
Fantatra fa i Mexico dia fantatra manerantany noho ny torapasika sy ny fiainany amin'ny alina. Iray amin'ireo zava-pisotro mahazatra ...